दुई श्रीमती सहित पहिलोपटक मिडियामा शिवहरी, अर्को पनि बिहे गर्ने तयारीमा ! – दैनिक नेपाल न्युज
नेपाली हास्य जगतका चर्चीत् कलाकार शिवहरी पौडेल संगै उनको दुई श्रीमती एकसाथ मिडियामा आएका छन । लामो समयको अन्तराल पछि दुवै एक साथ मिडियामा देखिएका हुन् । एकसमय जिरे खुर्सानीमा निकै रुचाएका यी पात्रहरु पछिल्लो समय संगै देख्न सकिएको थिएन ।
जिरे खुर्सानी बन्द भए पछि उनीहरु एक साथ मिडियामा भने पहिलोपटक आएका हुन् । शिवहरी पौडेल मुखमा हान्नु जस्तोले पनि आफुलाई निकै रमाईलो रुपमा देखाएका छन । चलचित्रको घोषणामा यी सब कलाकार एक साथ देखिएका हुन् । के हुदै छ बिशेष कुरकानी ? हेर्नुहोस:
छवी शिल्पाको कथाले लियो फेरी नयाँ मोड उनिहरुलाई प्रहरीले खोजीरहेका बेला विवाह दर्ता गर्ने वडा सचिवको रहस्यमय निधन (भिडियो हेर्नुहोस्)